Mitantara momba ny rivodoza ireo bilaogera Bangladeshita · Global Voices teny Malagasy
Mitantara momba ny rivodoza ireo bilaogera Bangladeshita
Voadika ny 27 Aogositra 2018 3:55 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Jiona 2007)
Mety efa renao angamba ny vaovao momba ny Rivodoza Sidr izay nandrava ny faritra morontsiraka atsimon'i Bangladesh, ary nahafatesana olona an'arivony ary an-tapitrisany no nafindra toerana. Azo inoana fa namaky ny vaovao tamin'ny gazety na ny blaogy ianao ary nahita sary mampihoro-koditra tamin'ny fahitalavitra na naheno tatitra mampihoro-koditra tamin'ny radio. Saingy tsy ho feno ny fahatakaranao ny fandravana ateraky ny rivo-doza sy ny faharetan'ny mponina ao Bangladesh raha tsy mamaky ny kaonty voalohany avy amin'ireo bilaogera ao an-toerana ianao.
Milaza ny fanehoan-kevitr'izy ireo momba ny loza voajanahary ao amin'ny bilaoginy teny Anglisy, Bangladesh from our view sy ny bilaoginy amin'ny teny Bangla, Amader Kotha ireo bilaogeran'ny Nari Jibon.
Kazi Rafiqul Islam milaza ny zava-niainany avy any an-drenivohitra Dhaka:
“Noho ny rivotra mahery vaika, tapaka ny herinaratra tamin'ny 10:15 alina (alakamisy). Avy eo nandeha natory aho saingy tsy nahita tory noho ny fitomboan'ny fifofofofoan'ny rivotra…. Tamin'ny 2 ora maraina, nahazo antso an-tariby avy amin'ny zokiko vavy izay tao an-tranon'ny rahavaviny tao an-tanànan'i Barisal aho. Nampahafantatra izy fa ao anatin'ny loza goavana izy ireo. Nanidina noho ny rivo-doza ny tafon-trano saingy voavonjy izy ireo. … .. Niantso ny zandriko faravavy tao an-tanàna aho. Nampahafantatra ahy izy fa tsy misy atahorana ny aminy saingy marobe ireo hazo nazeran'ny rivo-doza …. Nandre feo marobe aho tamin'ny 2 sasany ora maraina. Nijery tany ivelany aho ary nahita fa nianjera tamin'ny trano ny hazo eucalyptus ary nihiaka ny olona.
Satria tsy nisy ny herinaratra ary tsy afaka nandefa fahitalavitra sy radio nandritra ny andro manontolo (Zoma) aho. Tsy afaka nifanerasera tamin'ireo olona voakasiky ny rivo-doza izahay satria tsy afaka namahana finday. …. Ka dia tafasaraka tamin'izao tontolo izao. Ny alina, lasa tanàna haolo i Dhaka. Tsy nanana herinaratra izahay, tsy nisy rano; tsy afaka nandro ihany koa, maro ny olona tsy afaka nahandro satria tsy nisy rano. “
Zava-niainana sy fanehoan-kevitra mitovy amin'izany no nalefan'ireo mpandray anjara hafa ao amin'ny Nari Jibon
Sofia Khatun [bn]: “Bangla an-tapitrisany no tsy misy mamonjy. Atolory ny tananao azafady.”
Zannat Ara Amzad Liva [bn]: “Misy fanontaniana ato an-tsaiko hoe nahoana io fahatezeran'ny natiora io no nihatra tamin'ny ankizy tsy manan-tsiny, sy ny olona tena mahantra?”
Irin Sultana [bn] “Mbola mila rano fisotro, sakafo, lamba sy fanafody ireo olona niharan'ny rivodoza. Nahatonga olona maro tsy hanam-bola ity rivodoza ity. “
Laily Jahan Meghla [bn] “ny vaovao tena nampalahelo ahy mafy dia nisy zazavavy kely teraka ny marainan'ny 15 Novambra tao Shariatpur ary maty tao anatin'ny orambe avy eo tamin'ny alina.”
Taslima Akhter “Tao anatin'ny tahotra no nandaniana ny alina. Nanjary narary aho sy ny fianakaviako satria tsy maintsy lenan'ny orana”
Mitantara momba ny faharetana manome aingam-panahy avy amin'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny Nari Jibon ny tale mpanatanteraka ao amin'ny Nari Jibon, Dr. Kathryn Ward. Nankany amin'ny birao ny mpiasa sy ny mpianatry ny tetikasa Nari Jibon tamin'ny asabotsy mba hiasa sy hianatra na dia teo aza ny tsy fisian'ny herinaratra sy ny aterineto. Nandefa vaovao farany momba ny toe-draharaha sy ny ezaka fanavotana ihany koa izy.
MG Rabbany Sujan indray mampiseho sary ny amin'ny fomba iatrehan'ny mponina ao amin'ny faritra mahantra ao an-drenivohitr'i Dhaka ny fahavoazana nateraky ny rivodoza sokajy 3. Nandefa tatitra sy sary vaovao bebe kokoa izay nasongadina tao amin'ny CNN mihitsy i Sujan. Natao fanadihadiana tao amin'ny CNN ihany koa i Rafiq na dia teo aza ny fifandraisana ratsy an-telefônina.
Nandefa sary sy vaovao momba ny ezaka fanavotana nataon'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ihany koa i Sujan.
Ny Zoma lasa teo, nikarakara fampiofanana momba ny lahatsary sy ny sary nomerika ho an'ireo vehivavy bilaogera ny tetikasa Nari Jibon. Hoy i Shirin Sultana, mpandray anjara hoe:
Nisitraka ity fampiofanana ity aho ary tena faly nanatevin-daharana ity programa ity. Mieritreritra ny hividy fakantsary nomerika aho mba ahafahako maka sary maro avy any Bangladesh ary te-hampiseho ny hakanton'i Bangladesh-nay aho.
Vakio ireo fanehoan-kevitra maro avy amin'ireo mpandray anjara.
Ity misy lahatsary nalefan'ny ekipan'ny Nari Jibon tamin'ny volana jolay lasa teo, mampiseho ny tondra-drano tany amin'ny faritra iva ao Dhaka, renivohitra. Tsy ho ela dia hahita sary sy lahatsary maro avy amin'ireo mpandray anjara nanatrika ny atrikasa vao haingana isika.
2 ora izayKaraiba